Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Afduubkii dayuuradda TWA ee 847
Afduubkii dayuuradda TWA ee 847
Beirut, Lubnaan | Juun 14, 1985
14-kii Juun, 1985, argagixisada ku lug leh Hezbollah waxay afduubeen Dullimaadka TWA 847, oo ka soo ambabaxday magaalada Athens, Greece kuna sii socotay magaalada Rome, Italy. Waxay argagixisada markii hore dayuuradda u leexiyeen xagga magaalada Beirut, Lebanon, halkaasoo ay ku sii daayeen dhowr qof oo rakaabka ka tirsan iyagoo ku beddeshay shidaal. Kaddibna waxay dayuuradda u kicitintay magaalada Algiers, Algeria, halkaasoo ay ku fasaxeen dhowr qof rakaabka ka tirsan inta aysan dayuuradda dib ugu laaban magaalada Beirut.
Intii ay Beirut joogeen, waxay argagixisada aqoonsadeen Sarkaalka Ciidanka Badda ee Mareykanka, Robert Stethem. Waxay argagixisada garaaceen oo ay rasaas ku dhufteen Stethem, waxay kaddibna meydkiisii ku dul rideen laamiga. Beirut gudaheeda, waxaa dayuuradda soo raacey 12 qof oo dheeraad ah inta aysan dib ugu noqon Algiers, halkaasoo 65 qof oo kale lagu fasaxay.
Ugu dambeystii, waxay dayuuradda dib ugu soo laabatay magaalada Beirut, halkaasoo ay joogtay illaa Juun 30, oo ay rakaabkii soo haray loo kaxeeyay dalka Syria. Syria gudaheeda, waxaa lagu qaaday Dayuuradda Ciidanka Mareykanka waxaana loo kaxeeyay Jarmalka Galbeed. Argagixisadii ka mas’uulka ahaa weerarkan waxaa ka mid ahaa Ali Atwa, Hasan Izz-al-Din, Mohammed Ali Hamadei iyo dhowr kale.